Sat, Aug 18, 2018 | 16:41:10 NST
शान्ति र संविधानको माग गर्दै लमजुङमा मोटरसाईकल -याली
आश गुरुङ/ उज्यालो लमजुङ, कात्तिक १२ — शान्ति र संविधानको माग गर्दै लमजुङका युवाहरुले शनिबार देखि मोटरसाईकल याली सुरु गरेका छन् । सदरमुकाम वेसीशहरस्थित लमजुङ–मर्स्याङ्दी युवा क्लबको नेतृत्वमा युवाहरुले राष्ट्रिय झण्डा सहित चार दिने मोटरसाईकल -याली सुरु गरेका हुन् ।
निजीस्तरबाट सडक पुनर्निर्माण
भक्तपुर, कात्तिक १२ — भक्तपुर थिमीको चारदोबाटो–बालकोट सार्वजनिक सडक निजीस्तरबाट पुनर्निर्माण भएको छ । वागमति होम्स प्रालि रोज भिलेजका संचालक भेषराज लोहनीको एक करोड ६५ लाख रुपैयाको लागतमा थिमी चारदोबाटोबाट सुन्दरनगर चोक हुदै बालकोट जाने सडकको मर्मत तथा कालोपत्र गरिएको हो ।
छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा चार जनाको ज्यान गयो
काठमाडौं, कात्तिक ११ — धनुषा, स्याङ्जा र बारामा भएका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा चार जनाको ज्यान गएको छ । धनुषाको नक्टाझिजमा मोटर साईकलमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ ।
तिहारमा जुवा खेल्ने १६ जना प्रहरी फन्दामा
बुटवल, कात्तिक ११ — जुवा खेलेको भन्दै प्रहरीले बुटवलको नयाँ गाउबाट १६ जना लाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको टोलीले गएराती १६ जना लाई पक्राउ गर्दै जुवाको खाल वाट चार लाख भन्दा वढि रकम समेत बरामद गरेको छ ।
छुट्टाछुट्टै आगलागीका घटनामा दुई लाख भन्दा बढीको क्षति
काठमाडौं, कात्तिक ११ — रुपन्देही र नवलपरासीमा भएको आगालागीका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ । प्रहरीका अनुसार रुपन्देहीको लुम्विनीमा अर्जुन कोहारको घरमा आगो लाग्दा ५० हजार बढिको क्षति भएको छ ।
तिहारको अन्तिम दिन भाइटिका आज
काठमाण्डौं, कात्तिक - ११ हिन्दुको महान् चाड तिहारको अन्तिम दिन आज देशभरि परम्पराअनुसार भाइटीका मनाइँदैछ । आज टीकाको साईत विहान ११ बजेर ५५ मिनेटमा रहेको नेपाल पाचाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष माधव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सकेसम्म साईतमै टीकालगाउनु राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालले प्रहरी लगाएर घर पठायो
पोखरा, कात्तिक १० — पोखरामा सञ्चालित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई प्रहरी लगाएर अस्पतालबाट घर पठाएको छ । पर्वतको शिवालय १ खरेहाका ७३ बर्षिय जीतबहादुर श्रेष्ठलाई मणिपाल अस्पताललले आइसियुमा राख्नुपर्नेमा प्रहरी लगाएर घर फर्काएको उहाँका आफन्तले बताएका छन ।
लमजुङको ताराचोक गाउँमा तिहारमा बिजुली उपहार
लमजुङ, कात्तिक १० — सधैँ टुकीको भरमा अध्याँरो काट्नु पर्ने ठाउँमा तिहारको बेलामा बिजुलीको उज्यालो पाउँदा कति खुसी आउला ? तिहारको खुसीयालीसँगै उत्तरी लमजुङको भुलभुले गाविसस्थित ताराचोक गाउँमा पहिलोपटक विजुली बलेको छ ।
बस दुर्घटनामा काभ्रेमा २५ घाइते, नुवाकोटमा १ जनाको ज्यान गयो
काभ्रे, कात्तिक १० — काभ्रेको पाँचखालमा बिहीबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा २५ जना घाईते भएका छन । घाईते मध्ये १० जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आज तिहारको चौथो दिन, गोवर्द्धन पूजा
काठमाडौं, कात्तिक १० — आज तिहारको चौथो दिन गाई, गोरु र गोवर्द्धन पूजा गरिँदैछ । हिन्दूहरु गाईलाई लक्ष्मीको प्रतीक र गौमाता भनी आमाको रुपमा मान्छन् । आज गाईलाई सिँगारपटार र पूजाआजा गरी माला लगाई मीठो खानेकुरा खुवाईन्छ ।
आज नेवार समुदायको म्ह पूजा
काठमाडौं, कात्तिक १० — नेवार समुदायमा आज आफ्नै शरीरको पूजा सहित म्ह पूजा गरिँदैछ । म्ह पुजामा परिवारको मूलीले परिवारका सबै सदस्यहरुको पूजा गरी हाँस वा कुखुराको फुल सगुन दिने चलन छ ।
नेपाल संवतको नयाँवर्ष ११३२ सुरु
काठमाडौं, कात्तिक १० — आजदेखि नेपाल संवतको नयाँवर्ष ११ सय ३२ सुरु भएको छ । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले इ.सं. ८८० मा गरिब नागरिकको ऋण मोचन गरी नेपाल संवतको शुरुवात गर्नुभएको थियो ।
स्वदेशको तिहार सम्झँदै, बिदेशी भूमिमा आँशु चुहाउँदै
रविराज बराल/ उज्यालो — देशभर तिहारको चहलपहल छ । सबैतिर तिहारकै रमझम छ । गाउँमा मखमली र सयपत्री फूल ढकमक्क फुलेको छ । शहरमा बाटो र पसलभरी फूलका माला र गुच्छा झुन्ड्याइएको छ । तर रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई भनें तिहारले मन कुँढ्याएको छ । १२ घण्टाको ड्युटी गर्दै सुन्दर भविष्यको सपना देखिरहेका विदेशमा रहेका साथीहरुले नेपालमा रहँदा मनाएको तिहार झलझली सम्झिरहनु भएको छ । यस्तै केही साथीहले उज्यालोको फेसबुक फ्यान पेजमा तिहारका बारेमा मनमा उठेका तरंग साट्नु भएको छ ।
उज्यालो घरमा कलाकारको देउसी (भिडियो)
यस पटकको तिहारमा उज्यालो घरमा गायक बमबहादुर कार्की, जीवन शर्मा, बिमलराज क्षेत्री, कस्तुप पन्त, खुमन अधिकारी, राजु ढकाल, गायीका देवी र्घर्ती, चन्द्रकला शाह लगायतले छुट्टा छुट्टै देउसी भैलो खेल्नु भयो ।
काठमाण्डौं र नवलपरासीमा भएका दुर्घटनामा ३ को मृत्यु
काठमाण्डौं, कात्तिक ९ - काठमाण्डौं र नवलपरासीमा मंगलवार राती भएका दुर्घटनामा तीन जनाको ज्यान गएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दुम्किबास-५ मा भएको मोटरसाईकल दुर्घटनामा दुम्किबास २ का ३५ बर्षीय नरबहादुर बिक र उहाँकी पाँच बर्षीया छोरी एलिनाको ज्यान गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।
उज्यालो घरमा कलाकारको देउसी (फोटो फिचर)
यस पटकको तिहारमा उज्यालो घरमा देउसी भैला खेल्न गायक बमबहादुर कार्की, जीवन शर्मा, बिमलराज क्षेत्री, कस्तुप पन्त, खुमन अधिकारी, राजु ढकाल, गायीका देवी घर्ती, चन्द्रकला शाह लगायत आउनु भएको थियो । त्यही देउसीका बेलाका केही तस्विरहरु ।
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटको १०३ औं जन्मजयन्ती आज
काठमाण्डौं, कात्तिक ९ - महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एकसय ३ औं जन्मजयन्ती आज बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदैंछ । विक्रम संवत १९६६ कात्तिक २७ गते पण्डित तिलमाधव देवकोटा र अमरराज्य लक्ष्मीदेवी देवकोटाका साहिँलो छोराका रुपमा काठमाण्डु धोबिधारामा देवकोटाको जन्म भएको हो ।
आज लक्ष्मीपूजा गरिँदै
काठमाण्डौं, कात्तिक ९- आज बेलुकी घरघरमा लक्ष्मीपूजा र दीपावली गरिँदैछ । दिनभर व्रत बसी बेलुकी दीपावलीका साथ धनधान्यकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मीको पूजा गर्ने चलन छ । आज घरका झ्यालढोकाका साथै गाग्री र कलशमा फूलका माला लगाई आँगन पिंढी दलान कोठाचोटा र छिँडी गाईको गोबरले लिपेर सफा र चिल्लो पारिन्छ ।
दुबईमा मोबाईल चोरेको आरोपमा १० जना नेपाली पक्राउ
काठमाण्डौं, कात्तिक ८ - मोबाईल चोरीको आरोपमा दुबईमा १० जना भन्दा बढी नेपाली कामदारलाई प्रहरीले पक्रेको छ । ९/१० जना कामदार बस्ने कोठाबाट एक जनाको मोबाईल चोरी भएपछि त्यहाँ रहेका सबैलाई प्रहरीले पक्रेर झण्डै दुई महिनादेखि जेलमा राखेको पीडित मध्येका एक नारायण बेलबासेको परिवारले बताएको छ ।
२ हप्तामा १७ जना शिकारी पक्राउ
चितवन, कात्तिक ८ - वन्यजन्तु चोरी शिकारीमा संलग्न भएको अभियोगमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पछिल्लो दुई हप्तामा नियन्त्रणमा लिएका १७ जनालाई आज सार्बजनिक गरेको छ । गैडा मार्ने र खाग बेच्ने कार्यमा सम्लग्न ब्यक्तिहरुको साजाल पक्राउ गरि सार्बजनिक गरिएको चितवन राष्ट्रीय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत झमक कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
राती १२ बजे पछि देउसी नखेल्न प्रशासनको आग्रह
काठमाण्डौं, कात्तिक ८ - जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले राती १२ बजे भन्दापछि देउसी भैलो नखेल्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले मंगलवार सूचना जारी गरी जर्बजस्ती देउसी भैलो नखेल्न पनि सचेत गराएको छ । देउसी भैलोको नाममा जर्बजस्ती रकम तोक्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै कार्यालयले देउसी भैलोको नाममा पैसा लिने काम नगर्न सूचित गरेको छ ।
हेटौंडामा यौन क्रियाकलापमा संलग्न २१ जना पक्राउ
हेटौंडा, कात्तिक ८ - हेटौडाको बसपार्कका बिभिन्न होटलमा छापा मारी प्रहरीले यौन क्रियाकलापमा संलग्न २१ जनालाई सोमवार राती पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो समयमा हेटौडामा यौन ब्यवसाय गर्ने युवतीहरुको संख्या बढेको भन्दै प्रहरीले बिशेष चेकिङ थालेको छ ।
धन्वन्तरी जयन्ती आज
काठमाण्डौं, कात्तिक ८ - आज धन्वन्तरी जयन्ती । विश्वकै पुरानो चिकित्सापद्धति मानिएको आयुर्वेदका प्रवर्द्धक धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको दिनको सम्झना स्वरुप हरेक कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाईन्छ ।
काठमाण्डौं, कात्तिक ८ - यमपञ्चकको पहिलो दिन आज र कुकुर तिहार मनाइँदै छ । धार्मिक मान्यताअनुसार काग र कुकुरलाई पूजा गरी विविध खानेकुरा दिई तिहार मनाईदैछ । चतुर्दशी तिथि टुटेकाले आज काग र कुकुर तिहार सँगै परेको हो । बिहान काग पूजा गरेर दिउसो कुकुर पूजा गर्न उपयुक्त हुने नेपाल पाचाँग निर्णायक समितिले जनाएको छ । सोमवार बेलुकी यमदिप दान गरेपछि यमपाचक शुरु भएपनि तिहारको क्रम मंगलवारदेखि मात्रै शुरु भएको हो । हाम्रो समाजमा कागलाई सन्देशवाहकका रुपमा पनि लिइन्छ । कसैको घरआँगनमा एकाबिहान काग करा...
बाजुरामा गाडी पुगेपछि ....
निमेन्द्र शाही/उज्यालो, बाजुरा, कात्तिक ७ - बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा सोमवार पहिलो पटक यात्रु बस पुगेपछि स्थानीयबासिन्दाले बाजा गाजासहित गाडीको स्वागत गरेका छन् । मार्तडीसम्म पोहोर नै चल्न थालेका ट्रयाक्टर गत जेठमा पानी परेपछि चल्न सकेका थिएनन् । बाटो मर्मत गरेपछि आइतवार बिहान ५ वटा ट्रयाक्टर मार्तडी पुगेका थिए ।
घरको छतबाट खसेर एक जनाको ज्यान गयो
नवलपरासी, कात्तिक ७ — नवलपरासीमा आफ्नै घरको छतबाट खसेर एक जनाको ज्यान गएको छ । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका ४ जितपुरका ३२ बर्षीय महेश कुर्मीको आइतबार राति घरको छतबाट खसेर ज्यान गएको हो ।
काठमाडौं, कात्तिक ७ — आजदेखि नेपालीहरुको दोश्रो ठुलो पर्व तिहार सुरु भएको छ । बेलुकी यमदीप दान गरेपछि यमपञ्चक सुरु हुन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले तिहारलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ ।
एकमहिना देखि बेपत्ता बालिका आफन्तको सम्पर्कमा
दुर्गाप्रसाद शर्मा/ उज्यालो । पर्वत, कात्तिक ६ - एक महिनादेखि बेपत्ता भएकी पर्वतकी एक बालिकालाई आइतबार आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ । एक महिना देखि कञ्चनपुरमा अलपत्र परेकी पर्वतको ठुलीपोखरी ६ घर भएकी १४ बर्षिय सरिता नेपालीलार्ई कञ्चनपुरमा रहेको कृष्णपुर सेवा केन्द्रले पर्वतसम्म ल्याएको हो ।
काग तिहारको दिन काठमाडौंमा काग सम्मेलन
काठमाडौं, कात्तिक ६ — गौतम सापकोटा ‘चरी दादा’ले काग तिहारका दिन काठमाडौंमा काग सम्मेलन गर्नुहुने भएको छ । कार्यक्रमको आयोजक देउराली क्लबले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि शान्ति र संविधान निर्माणको कामना सहित कात्तिक ८ गते संविधानसभा भवन बाहिर काग सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।
‘ज्यानमारा’ झोलुङ्गे पुल
काठमाडौं, कात्तिक ६ — सुरक्षाको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा देशभरका झोलुंगे पुल जोखिममा छन् । जोखिममा परेका झोलुंगे पुल सर्वसाधारणको ‘काल’ बनिरहेका छन् ।
पूर्व सांसदकी बुहारी १८ वर्षदेखि २ वटा सरकारी जागिर खाँदै
अमर सुनार/ उज्यालो । दैलेख, कात्तिक ६ — दैलेखमा पूर्व सांसदकी बुहारीले अठार वर्षदेखि दुईवटा सरकारी जागिर खाँदै आएको रहस्य खुलेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजूरी परेपछि दैलेखको बिसल्ला गाविस वडा नं. ४ भुवाखाडाकी रेखा शाहीले आफ्ना ससुराको रजनीतिक पहुँचका आधारमा विगत १८ वर्षदेखि दुईवटा सरकारी जागिर खाँदै आएको रहस्य खुलेको हो ।
झोलुंगे पूल चुँडिदा बेपत्ता हुनेको अवस्था अझै थाहा हुन सकेन
काठमाडौं, कात्तिक ६ — चितनवको फिस्लिङ र गोरखाको भूम्लिचोक जोड्ने त्रिशुली नदीमाथिको झोलुंगे पूल चुँडिदा बेपत्ता भएकाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । स्थानीयबासिन्दाले केही हराईरहेको आशंका गरेपनि एक जना भारतीय नागरिकाको मात्र हराइरहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
तरकारी बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा २ जनाको ज्यान गयो
हेटौँडा, कात्तिक ६ — मकवानपुरको नाम्टार गाविस–३ लामिडाँडामा शनिबार राति तरकारी बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ । तरकारी बोकेर पालुङ्गबाट हेटौंडाका लागि छुटेको बा २ ख ८३३४ नम्बरको पिकअप भ्यान सडकबाट तल खसेको हो ।
अमलेखगञ्जको विषादी भण्डार हटाउन सुरु
बारा, कात्तिक ५ — बाराको अमलेखगञ्जमा ३५ बर्षअघि भण्डारण गरिएको विषादी हटाउन सुरु गरिएको छ । जर्मन विकास सहयोग संस्था (जिआइजेड) को सहयोगमा शनिबार देखि विषादी हटाउन सुरु गरिएको हो ।
झोलुङ्गे पुल चुँडिदा दुई जनाको ज्यान गयो
काठमाडौं, कात्तिक ५ — चितवनको फिस्लिङबाट गोरखाको भुम्लिचोक गाविस जोड्ने झोलुंगे पूल चुँडिदा दुई जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा गोरखा बुँकोटका मानबहादुर आले र भारतकी १२ वर्षिया फ्लोरेन्स रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा १३ जना घाईते भएका छन् । तीनजना त्रिशुलीमा हराईरहेको आशंका गरिएको छ ।
मकवानपुरमा भएको मिनीट्रक दुर्घटनामा ३ जनाको ज्यान गयो
मकवानपुर, कात्तिक ४ - त्रिभुवन राजपथको मकवानपुरको टिष्टुङमा भएको मिनिट्रक दुर्घटना ३ जनाको ज्यान गएको छ । टिस्टुङबाट तरकारी लिएर काठमाण्डूका लागि छुटेको बा ६ च ५३९८ नम्बरको मिनिट्रक शुक्रवार बिहान सडकबाट करिव एक सय ५० मिटर तल खोलामा खस्दा ३ जनाको ज्यान गएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
बालिका बलात्कार गर्नेलाई बचाऊ नगर्न महिला अधिकारकर्मीहरुको आग्रह
अमर सुनार/ उज्यालो । दैलेख, कात्तिक ३ — दैलेखमा सात वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने नारायण नगरपालिका वडा नं. १ निवासी २१ वर्षको केशव केसीलाई बचाऊको प्रयास भएको भन्दै महिला अधिकारवादीहरुले विरोध गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी मृत फेला
अमर सुनार/ उज्यालो । दैलेख कात्तिक ३ — दैलेखमा एक जना ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता मृत फेला परेका छन् । नारायण नगरपालिका ६ नयाँ गाउँ घर भएका ५० वर्षीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता विष्णु केसी त्रिवेणी स्वास्थय चौकीको क्वाटरमा बिहीबार बिहान मृत अवस्थामा भेटिएको सिनियर अहेव नन्दलाल जैसीले जानकारी दिनुभयो ।
आउँदा पिठ्यु चढेर फर्कदा ठमठम हिडेर
केशबप्रसाद भट्टराई/उज्यालो, ताप्लेजुङ, कार्तिक ३ - छोराले पिठ्युमा एक दिनको पैदल बोकेर ल्याएका ढुङ्गेसाघु ९ ताप्लेजुङका डम्बर बहादुर राई घर फर्कदा ठमठम हिडेर जानुभयो । लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्यायन सस्थानको प्राविधिक सहयोगमा डिचेन डोङला स्मारक आँखा उपचार केन्द्रद्धारा ताप्लेजुङमा साचालित आँखा शिबिरमा मोतीबिन्दुको अप्रेशन गरेपछि राई हिडेरै घर जान सक्नु भएको हो ।
गरिब शहरमा बढे, गाउँमा घटे
कमल पराजुली/ उज्यालो, काठमाण्डौं, कात्तिक ३ - नेपालको गरिबी २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङक विभागले पारिवारिक उपभोग खर्चको आधारमा गरेको तेस्रो पारिवारिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको हो ।